ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် LGBT ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကျော် ဆယ်လီဘရစ်တီ (၈)ဦး - For her Myanmar
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် LGBT ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကျော် ဆယ်လီဘရစ်တီ (၈)ဦး
သူတို့ကတော့ နာမည်ကျမှာတွေ ဝေဖန်ခံရမှာတွေ မကြောက်ဘဲ အရှိအတိုင်း လက်ခံပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝန်ခံလိုက်ကြပြီနော်…
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး စံနှုန်းတွေက အတော်အတန် ခိုင်မာတယ်ဆိုပေမဲ့ LGBT အခွင့်အရေးအတွက်တော့ ရုန်းကန်နေရတုန်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် come out (gay / bi ဖြစ်ကြောင်း လူထုကို ကြေညာခြင်း) လုပ်ဖို့ဆိုတာ သိပ်မလွယ်လှပါဘူး။
အထူးသဖြင့် လူသိများတဲ့သူတွေ come outလုပ်တဲ့အခါ ပိုပြီး ဖိအားတွေများမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ချို့ကတော့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ come out လုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တွေကတော့…
(1) Greyson Chance
Youtubeမှာ အသံအေးအေးလေးနဲ့ Cover song တွေ ဆိုပြီး နာမည်ကြီးလာတဲ့ Sunshine and City lights အဆိုတော်လေး Greyson Chanceကို ယောင်းတို့ သိကြတယ်ဟုတ်? ခလိန်းဟာ ဂေးဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇မှာ ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။
Greyson Chanceဟာ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ဖို့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိဖို့ ကြိုးစားနေရတာကြောင့် အစပိုင်းကာလတွေမှာ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ခုလို လူသိရှင်ကြားအသိပေးဖို့ နှစ်တွေအများကြီး ကြာခဲ့တာပါ။ အခုတော့ “ကျွန်တော့်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို ဂုဏ်ယူနေပါပြီ” လို့ သူ့ရဲ့ instagram accountမှာ ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
(2) Amandla Sternberg
The Hunger games, Everything everything တို့နဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးလေး Amandla ဟာ gay ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လမှာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သူ(မ)ဟာ ဂေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကြီးပြင်းလာရပုံတွေ လူမည်းအမျိုးသမီးတွေထဲမှာ ဂေးတွေကို ကိုယ်စားပြုမယ့်သူ မရှိသေးတာတွေကို Wonderland မဂ္ဂဇင်းအတွက် အင်တာဗျူးမှာ ပြောကြားသွားခဲ့ပါ။ ကိုကိုတွေ အသည်းကွဲအောင် စပရိုက် တိုက်ချတာနော် :’)
(3) Ellen Degeneres
ပရိသတ်တွေကို အမြဲရယ်မောအောင် လုပ်နိုင်လို့ အားလုံးက ချစ်ခင်ကြတဲ့ The Ellen Show အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ Ellen Degeneres ဟာလည်း ဂေးတစ်ဦးပါ။ သူ(မ)ဟာ ၁၉၉၇ခုနှစ်မှာ ဂေးဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး သူ(မ)ရဲ့ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှု အမှန်ကို Time Magazine ရဲ့ မျက်နှာဖုံးမှာ “Yep Im Gay” ဆိုတဲ့ စာလုံးကြီးတွေနဲ့ ဂုဏ်ယူစွာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Ellen မှာ ၂၀၀၈ခုနှစ်မှာ ဩစတြေးလျ/အမေရိကန် မင်းသမီး Portia De Rossi နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး သိပ်ချစ်ကြတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ခုဆို အိမ်ထောင်သက် ဆယ်နှစ်ပြည့်သွားပါပြီ။
Related Article >>> နာမည်ကြီးဖို့ဆိုတာ အရည်အချင်းကအဓိကပါ
(4) Cara Delevingne
Paper Towns, Suicide Squad တို့မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်သရုပ်ဆောင် မတ်မတ် Cara Delevingne ဟာ Sexual fluidity ရှိသူပါလို့ Glamour magazine အတွက် အင်တာဗျူးမှာပြောခဲ့ပါတယ်။
Cara ဟာ သူ(မ)ကိုယ် သူ(မ) “Gay” လို့ မသုံးနှုန်းသလို လူတွေက သူ(မ)ကို Gay လို့ တံဆိပ်ကပ်ကြတာကိုလည်း မကြိုက်ပါဘူးတဲ့။ သူ(မ)ရဲ့ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုဟာ Gay လည်း မဟုတ်၊ Straightလည်းမဟုတ်ဘဲ အမြဲပြောင်းလဲနေကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ယောကျာ်းလည်း ကြိုက်သလို မိန်းမလည်း ကြိုက်ပါတယ်တဲ့ လက်ရှိမှာတော့ မတ်မတ်ရဲ့ ချစ်သူဟာ အမေရိကန် အဆိုတော်မလေး St.Vincent ဖြစ်ပြီး အတူနေနေကြတာ ၂နှစ်တောင် ရှိသွားပါပြီ။
(5) Sam Smith
အိုပါးကတော့ သူ ဂေးဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၄တုန်းက ထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ (ထုတ်ပြောပြီးကတည်းက တစ်နေ့တခြား စိတ်ကြိုက် ပွင့်လာတာ ဘယ်သူမှ လိုက်မမှီတော့ဘူး )
Sam Smith ရဲ့ Lonely Hour Albumဟာဆိုရင် သူ ဂေး ဖြစ်နေတာကြောင့် ဘယ်တုန်းကမှ ပြန်ကြိုက်တာ မခံခဲ့ရတဲ့ သူ့အကြောင်းကို ဆိုထားတာပါ။ Sam Smith ဟာ Brandon Flynn နဲ့ တွဲခဲ့ပြီး ခုတော့ ပြတ်သွားပါပြီ။
Related Article >>> မော်ဒယ်လောကကို ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်ခဲ့တဲ့ မျိုးရိုးဗီဇမူမမှန်တဲ့ ရောဂါရှင်မော်ဒယ်မလေး Melanie Gaydos
(6) Jaden Smith
အချောလေးတွေ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် တွဲခဲ့တဲ့ Jaden Smith ဟာ Tyler, The creatorနဲ့ တွဲခုတ်နေကြောင်း concertမှာ ရုတ်တရက် ထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။
Jaden Smithရဲ့ ဝတ်ပုံစားပုံတွေကြောင့် Gay ဖြစ်ကြောင်း ကောလဟာလတွေ ထွက်နေ ရာကနေ ခုလို အတည်ပြုလိုက်တာမို့ ပရိသတ်တွေကို အတော်လေး အံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။ ( Kylie တစ်ယောက် ပုလင်းကွဲ ရှခဲ့တာပေါ့ )
(7) Jake Zyrus (Charice Pempengco)
အသံပါဝါ အားကောင်းကောင်းနဲ့ Cover songလေးတွေ ဆိုရာကနေ Gleeဇာတ်ကားအထိ ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ Charice ဆိုတဲ့ ပါးဖောင်းဖောင်းကောင်မလေး ကို မှတ်မိကြလား ယောင်းတို့ရေ? ခုတော့ သူက မူလသွင်ပြင်တွေ အားလုံးပျောက်ပြီး transgender တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ ( သူ့နဂိုအသံလေးပါ ပျောက်သွားတာနော် ) သူ(မ)ဟာ လိင်တူချစ်သူ ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၃ခုနှစ်မှာ ထုတ်ပြောလိုက်တာဖြစ်ပြီး “ကျတော့် စိတ်ဝိဉာဉ်က ယောကျာ်းလေးပါ” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ Jake Zyrus ဆိုတဲ့ ယောကျာ်းလေး နာမည်ခံယူပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်နေပေမဲ့ ဂေးဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံလိုက်မှုကြောင့် အနုပညာလောကမှာ ရပ်တည်ရ အလွန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်လို့ ရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။
Chainsmokers ရဲ့ Don’t let me down video မှာ ပါဝင်သီဆိုခဲ့တဲ့ အဆိုတော်မလေး Daya ဟာ bisexual ဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလက သူမရဲ့ instagramမှာ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်မချစ်တဲ့ ကောင်မလေးဟာ ကျွန်မကို တစ်နေ့တခြား ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေးလို့ LGBTQ အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရတာကို ဂုဏ်ယူမိပါတယ်” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ သူတို့တင်မကဘဲ အခြားအခြားသော come out လုပ်ထားတဲ့ ဆယ်လီဘရစ်တီတွေ အများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်။ ယောင်းတို့ရော ဘယ်လိုမြင်ကြလဲဟင်?
Reference links: pride more wonderwall out
သူတို့ကတော့ နာမညျကမြှာတှေ ဝဖေနျခံရမှာတှေ မကွောကျဘဲ အရှိအတိုငျး လကျခံပွီး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ဝနျခံလိုကျကွပွီနျော…
အနောကျနိုငျငံတှမှောရှိတဲ့ လူ့အခှငျ့အရေး စံနှုနျးတှကေ အတျောအတနျ ခိုငျမာတယျဆိုပမေဲ့ LGBT အခှငျ့အရေးအတှကျတော့ ရုနျးကနျနရေတုနျးပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ come out (gay / bi ဖွဈကွောငျး လူထုကို ကွညောခွငျး) လုပျဖို့ဆိုတာ သိပျမလှယျလှပါဘူး။
အထူးသဖွငျ့ လူသိမြားတဲ့သူတှေ come outလုပျတဲ့အခါ ပိုပွီး ဖိအားတှမြေားမှာပါ။ ဒါပမေဲ့ အနုပညာရှငျတဈခြို့ကတော့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ come out လုပျသှားခဲ့ပါတယျ။ သူတို့တှကေတော့…
Youtubeမှာ အသံအေးအေးလေးနဲ့ Cover song တှေ ဆိုပွီး နာမညျကွီးလာတဲ့ Sunshine and City lights အဆိုတျောလေး Greyson Chanceကို ယောငျးတို့ သိကွတယျဟုတျ? ခလိနျးဟာ ဂေးဖွဈကွောငျး ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇မှာ ဖှငျ့ဟခဲ့ပါတယျ။
Greyson Chanceဟာ သူ့ရဲ့ ကိုယျခန်ဓာနဲ့ ပတျသကျပွီး စိတျသကျတောငျ့သကျသာဖွဈဖို့၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှု ရှိဖို့ ကွိုးစားနရေတာကွောငျ့ အစပိုငျးကာလတှမှော နှုတျဆိတျနခေဲ့ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ခုလို လူသိရှငျကွားအသိပေးဖို့ နှဈတှအေမြားကွီး ကွာခဲ့တာပါ။ အခုတော့ “ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ဖွဈတညျမှုကို ဂုဏျယူနပေါပွီ” လို့ သူ့ရဲ့ instagram accountမှာ ကွငွောခဲ့ပါတယျ။
The Hunger games, Everything everything တို့နဲ့ အောငျမွငျခဲ့တဲ့ မငျးသမီးလေး Amandla ဟာ gay ဖွဈကွောငျး ၂၀၁၈ ခုနှဈ ဇှနျလမှာ ထုတျဖျောပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ သူ(မ)ဟာ ဂေးတဈယောကျအနနေဲ့ ကွီးပွငျးလာရပုံတှေ လူမညျးအမြိုးသမီးတှထေဲမှာ ဂေးတှကေို ကိုယျစားပွုမယျ့သူ မရှိသေးတာတှကေို Wonderland မဂ်ဂဇငျးအတှကျ အငျတာဗြူးမှာ ပွောကွားသှားခဲ့ပါ။ ကိုကိုတှေ အသညျးကှဲအောငျ စပရိုကျ တိုကျခတြာနျော :’)
ပရိသတျတှကေို အမွဲရယျမောအောငျ လုပျနိုငျလို့ အားလုံးက ခဈြခငျကွတဲ့ The Ellen Show အစီအစဉျတငျဆကျသူ Ellen Degeneres ဟာလညျး ဂေးတဈဦးပါ။ သူ(မ)ဟာ ၁၉၉၇ခုနှဈမှာ ဂေးဖွဈကွောငျး ကွညောခဲ့ပွီး သူ(မ)ရဲ့ လိငျစိတျတိမျးညှတျမှု အမှနျကို Time Magazine ရဲ့ မကျြနှာဖုံးမှာ “Yep Im Gay” ဆိုတဲ့ စာလုံးကွီးတှနေဲ့ ဂုဏျယူစှာ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ Ellen မှာ ၂၀၀၈ခုနှဈမှာ ဩစတွေးလြ/အမရေိကနျ မငျးသမီး Portia De Rossi နဲ့ လကျထပျခဲ့ပွီး သိပျခဈြကွတဲ့ သူတို့နှဈယောကျဟာ ခုဆို အိမျထောငျသကျ ဆယျနှဈပွညျ့သှားပါပွီ။
Related Article >>> နာမညျကွီးဖို့ဆိုတာ အရညျအခငျြးကအဓိကပါ
Paper Towns, Suicide Squad တို့မှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ အင်ျဂလိပျသရုပျဆောငျ မတျမတျ Cara Delevingne ဟာ Sexual fluidity ရှိသူပါလို့ Glamour magazine အတှကျ အငျတာဗြူးမှာပွောခဲ့ပါတယျ။
Cara ဟာ သူ(မ)ကိုယျ သူ(မ) “Gay” လို့ မသုံးနှုနျးသလို လူတှကေ သူ(မ)ကို Gay လို့ တံဆိပျကပျကွတာကိုလညျး မကွိုကျပါဘူးတဲ့။ သူ(မ)ရဲ့ လိငျစိတျတိမျးညှတျမှုဟာ Gay လညျး မဟုတျ၊ Straightလညျးမဟုတျဘဲ အမွဲပွောငျးလဲနကွေောငျး ပွောခဲ့ပါတယျ။ ယောကျြားလညျး ကွိုကျသလို မိနျးမလညျး ကွိုကျပါတယျတဲ့ လကျရှိမှာတော့ မတျမတျရဲ့ ခဈြသူဟာ အမရေိကနျ အဆိုတျောမလေး St.Vincent ဖွဈပွီး အတူနနေကွေတာ ၂နှဈတောငျ ရှိသှားပါပွီ။
အိုပါးကတော့ သူ ဂေးဖွဈကွောငျး ၂၀၁၄တုနျးက ထုတျပွောခဲ့ပါတယျ။ (ထုတျပွောပွီးကတညျးက တဈနတေ့ခွား စိတျကွိုကျ ပှငျ့လာတာ ဘယျသူမှ လိုကျမမှီတော့ဘူး )
Sam Smith ရဲ့ Lonely Hour Albumဟာဆိုရငျ သူ ဂေး ဖွဈနတောကွောငျ့ ဘယျတုနျးကမှ ပွနျကွိုကျတာ မခံခဲ့ရတဲ့ သူ့အကွောငျးကို ဆိုထားတာပါ။ Sam Smith ဟာ Brandon Flynn နဲ့ တှဲခဲ့ပွီး ခုတော့ ပွတျသှားပါပွီ။
Related Article >>> မျောဒယျလောကကို ပွောငျးပွနျလှနျပဈခဲ့တဲ့ မြိုးရိုးဗီဇမူမမှနျတဲ့ ရောဂါရှငျမျောဒယျမလေး Melanie Gaydos
အခြောလေးတှေ တဈယောကျပွီး တဈယောကျ တှဲခဲ့တဲ့ Jaden Smith ဟာ Tyler, The creatorနဲ့ တှဲခုတျနကွေောငျး concertမှာ ရုတျတရကျ ထုတျပွောလိုကျပါတယျ။
Jaden Smithရဲ့ ဝတျပုံစားပုံတှကွေောငျ့ Gay ဖွဈကွောငျး ကောလဟာလတှေ ထှကျနေ ရာကနေ ခုလို အတညျပွုလိုကျတာမို့ ပရိသတျတှကေို အတျောလေး အံ့အားသငျ့စခေဲ့ပါတယျ။ ( Kylie တဈယောကျ ပုလငျးကှဲ ရှခဲ့တာပေါ့ )
အသံပါဝါ အားကောငျးကောငျးနဲ့ Cover songလေးတှေ ဆိုရာကနေ Gleeဇာတျကားအထိ ပါဝငျခှငျ့ရခဲ့တဲ့ Charice ဆိုတဲ့ ပါးဖောငျးဖောငျးကောငျမလေး ကို မှတျမိကွလား ယောငျးတို့ရေ? ခုတော့ သူက မူလသှငျပွငျတှေ အားလုံးပြောကျပွီး transgender တဈယောကျဖွဈနပေါပွီ။ ( သူ့နဂိုအသံလေးပါ ပြောကျသှားတာနျော ) သူ(မ)ဟာ လိငျတူခဈြသူ ဖွဈကွောငျး ၂၀၁၃ခုနှဈမှာ ထုတျပွောလိုကျတာဖွဈပွီး “ကတြေျာ့ စိတျဝိဉာဉျက ယောကျြားလေးပါ” လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
အခုတော့ Jake Zyrus ဆိုတဲ့ ယောကျြားလေး နာမညျခံယူပွီး အနုပညာအလုပျတှကေို လုပျနပေမေဲ့ ဂေးဖွဈကွောငျး ဝနျခံလိုကျမှုကွောငျ့ အနုပညာလောကမှာ ရပျတညျရ အလှနျခကျခဲခဲ့ပါတယျလို့ ရငျဖှငျ့ခဲ့ပါတယျ။
Chainsmokers ရဲ့ Don’t let me down video မှာ ပါဝငျသီဆိုခဲ့တဲ့ အဆိုတျောမလေး Daya ဟာ bisexual ဖွဈကွောငျး ပွီးခဲ့တဲ့ အောကျတိုဘာလက သူမရဲ့ instagramမှာ ကွညောခဲ့ပါတယျ။
“ကြှနျမခဈြတဲ့ ကောငျမလေးဟာ ကြှနျမကို တဈနတေ့ခွား ပြျောရှငျအောငျ လုပျပေးလို့ LGBTQ အသိုငျးအဝိုငျးရဲ့ အဖှဲ့ဝငျတဈယောကျဖွဈရတာကို ဂုဏျယူမိပါတယျ” လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
တကယျတော့ သူတို့တငျမကဘဲ အခွားအခွားသော come out လုပျထားတဲ့ ဆယျလီဘရဈတီတှေ အမြားကွီး ရှိနပေါသေးတယျ။ ယောငျးတို့ရော ဘယျလိုမွငျကွလဲဟငျ?
Tags: celebrities, Celebrity news, Come out, gay
မျက်ခုံးရိတ်တဲ့ သင်တုန်းဓားမကိုင်ခင် သိသင့်တဲ့အချက် ၄ ချက်
Wathun December 10, 2018
Park Min Young နဲ့ Kim Jae Wook တို့ရဲ့ မကြာခင်ထွက်ရှိတော့မယ့် ဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲအသစ် “Her Private Life”
Stella March 26, 2019
၂၀၁၈ ခုနှစ် အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုပေးပွဲက အမျိုးသမီးအနုပညာရှင်တွေရဲ့ အမိုက်စားဖက်ရှင်ပုံရိပ်များ (အပိုင်း၁)
Stella March 24, 2019